Iindlela ezi-8 zoyilo zedijithali zango-2017 Martech Zone
Iindlela ezi-8 zoYilo lweDijithali ka-2017
NgoLwesibini, Februwari 14, 2017 NgoLwesibini, Februwari 14, 2017 Douglas Karr
Uyilo loNxweme wenza umsebenzi omangalisayo wokugcina ngaphezulu kweendlela zoyilo loyilo ngokukhupha umfanekiso omkhulu wonyaka. U-2017 ujongeka njengonyaka oqinileyo wendlela yoyilo-ndiyazithanda zonke. Kwaye sidibanise uninzi lwezi kubaxhasi bethu kwaye nolwethu indawo yearhente.
Kunyaka wesithathu ngokulandelelana, sikhuphe eyona nguqulelo intsha yoyilo lweempawu ezithandwayo ze-infographic zango-2017. Nangona kukho imigaqo yoyilo efumaneka kwindalo iphela kwaye ingaphelelwa lixesha, ngokuqinisekileyo ikho nemikhwa eguqukayo minyaka le njengoko isenzo siqhubeka. Ezinye zezi ntsingiselo zinokubamba kwaye zibe yinxalenye yemigaqo engaphelelwa lixesha, ngelixa ezinye ziya kuphela. Makhe sijonge kwinto esiyibonileyo ngo-2016 ukuba silindele ukuqhubeka nokuthandwa, kwaye sinokulindela ntoni ngo-2017.
Uyilo lweWebhusayithi ye2017
Uyilo olusekwe ekhadini Ukuhamba ngokubonwayo kuya kubalasela ngakumbi kwiindawo zokundwendwela ukujonga ngokulula kwaye ufumane oko bakufunayo.
Ubukhulu beBoldography -Uyilo olukhulu kunye nesibindi kuyilo lwangoku luthandwa.
Imibala yokulahla emva -I-neon kunye nemibala ephambili yesibindi ifikelela kwiiflethi kunye neetoni zomhlaba ebezithandwa kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Iimpawu eziNqabileyo - Iimpawu ezincinci, ezinokubambeka ezinemigca ebhityileyo zikhula ekuthandeni ngaphezulu kweempawu ezineenkcukacha.
Iimpawu zeNeon -Ukongeza ubunzulu kwii-logo kunye nee-accents ezinemibala eqinileyo ye-neon yindlela entle yokuma.
AbaPhathi beRetro - ii-lilacs, iiblues zabantwana, kunye nepinki ezinemibala emhlophe ethambileyo edityaniswe nemigca eyomeleleyo yoyilo.
Iimilo zeBold - Iipoligoni, iimilo ezilinganayo, kunye neepateni zejiyometri zongeza isibheno.
Ukuqala - imizobo kunye nemifanekiso zibonelela ngamava awodwa.
Enye yeendawo zam endizithandayo endizindwendweleyo kulo nyaka yile Igadi yePhathi yeBhotile yeHarda yeSodas. Nje ukuba ufake ungaphezulu kwama-21, zilungiselele amava amangalisayo.
tags: 2017usana oluhlazaimibala ephambili yesibindiiimilo ezinesibindiubuchwephesha bokubhalauyilo lwekhadiimibalaiindlela zoyiloimizoboimibala edgyimibala enamandlaipati yegadiiimilo zejiyometriimizobo yoyilo lwegraphiciintsingiselo ze iconimifanekisolilacsneonIimpawu zeNeonimvelaphiiipelisiiipinkiii-icon ezincincitypography
Iinkcukacha-manani zeNtengiso yezeNtlalontle awunakuphuthelwa!
Ngaba iMithombo yeendaba yeNtlalontle inyanzelisa abathengisi ukuba bakude neMedia Media?
Mar 5, 2015 ngo 2:46 PM
"Khawufane ucinge xa ​​uqasha umntu ozokuthengisa kwaye uhlawule inyanga nenkonzo yakhe emva koko ubayeke bahambe-bekulindele ukuba abaguquli baqhubeke nokungena." Oku kuyinyani-abathengi / iarhente kufuneka ibenokwenyani malunga nesicwangciso kwaye bangalindeli ukuba izinto ezimangalisayo zenzeke kwinyanga enye. Iziseko kufuneka zibekwe. Iposi enkulu uDoug!